Kitra eoropeanina – «Ligue des champions»: sahiran-tsaina ny Ajax hidona amin’ny Lille | NewsMada
Kitra eoropeanina – «Ligue des champions»: sahiran-tsaina ny Ajax hidona amin’ny Lille
Hanomboka, amin’ity anio ity, ny fifanintsanana isam-bondrona, hiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa «Ligue des champions », taranja baolina kitra. Anisan’ny fihaonana andrasan’ny rehetra ny an’ny Ajax sy ny Lille.
Lalao valo no voalahatra, anio talata, eo amin’ny fanombohan’ny fifanintsanana isam-bondrona, hiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa «Ligue des champions», taranja baolina kitra. Fihaonana hifantohan’ny sain’ny rehetra ny fifandonan’ny Ajax Amsterdam sy ny ekipa frantsay, ny Lille.
Hampiantrano ny lalao mandroso, amin’ity, ry zareo Holandey. Sahiran-tsaina tanteraka izy ireo amin’ity fihaonana ity satria tsy ao aminy intsony ireo mpilalao tompon-toerana sy tena andrin’ny ekipa. Anisan’ireny i Frenkie de Jong sy i Matthijs de Ligt, lasa nifindra any amin’ny FC Barcelone sy any Juventus de Turin.
Araka izany, hampakatra ireo mpilalao zandriny ny mpanazatra holandey, amin’ity. Anisan’ireny i Edson Alvarez sy i Razvan Marin ary i Lisandro Martinez, latsaky ny 23 taona avokoa. Ankoatra azy ireo, eo koa i Quincy Promes, vao 27 taona monja, avy any amin’ny FC Séville.
Araka ny fantatra, valo tamin’ireo mpilalao 11 niatrika ny manasa-dalana, tamin’ity “Ligue des champions” ity, tamin’ny taon-dasa, no mety mbola hijoro, anio. Raha tsiahivina, tsy mbola resy aloha hatreto ny Ajax, tamin’ireo lalao 10 nataony, tamin’ny fifaninanana rehetra (amboara sy tompondaka), any Pays-Bas. 28 ny baolina tafiditry ny Ajax ka ny 19 tamin’ireo, teo amin’ny fiadiana ny ho tompondaka.
Tsiahivina fa nandresy ny PSV Eindhoven, tamin’ny isa, 2 no ho 0, ny Ajax, teo amin’ny fiadiana ny “Super coupe”, ny 27 jolay lasa teo.
-Internazionale # Slavia
-Lyon # Zenith
-Ajax # Lille
-Benfica # Leipzig
-Dortmund # Barcelone
-Chelsea # Valence
-Red Bull Salzbourg # KRC Genk
-Naples # Liverpool